IFTIINKACUSUB.COM: Adeer mayaad hubtaa ,Miyaan soo Dhintay.
Faarax waxa kaloo oo uu arkay hadana iyada oo ay dhinaca midigta ay ka xigaan dad sodoo kale taahaya oo qaarkood ay ku qarwayan Laa'ilaha ilalaah Muxamadoow Sarululaah scw.Faarax waxa uu fahmi waayay sababta halkan uu u yimi iyo meeshani waxa ay tahay.
Faarax waxa kale oo uu Indhaha ku dhuftay Ishiisuna ay ka libiq'sanwayday Rag iyo Dumar cadaana oo gaaf wareegaya Qolka ay dadku yalaan oo ah mid aad u wayn,Faarax waxa kaloo dareen shaki ah ku dhaliyay Dadkan Cadaanka ah oo ku wada hadlaaya Luqad aanu Faarax waligii intuu Jiray aanu maqal taasi oo ah Luqada Ingirisiga.
Faarax ayaa markii uu fahmi wayay meeshani waxa ay tahay iyo waxa loo keenay ,ayaa waxa uu damcay in uu su'aalo waydiiyo ninkan sariir ahaan ku xiga ee Cadaawe layidhaa,kadibna waxaa dhex martay sheekadan.
Faarax isla markiiba waxa uu dareemay sida aan munaasibka ahayn ee uu Cadaawe salaanta uga qaaday ,balse dan kama galine waxa uu sii watay Su'alahisii.
Cadaawe : waa Malaa'igtii !!
Maalintii danbe ayaa Faarax waxa uu arkay in Dadkii cadaanka ahaa ay kor taagan yihiin Sariirtii uu jiifay ninkii Cadaawe ,kuwaasi oo Warqadiisii qoraal inta ay ku qoreen ka tagay . kadibna faarax ayaa Cadaawe waxa uu waydiiyay su'aashan.
Wakhti yar ka bacdi waxa ay dhakhatiirtii isasoo kor tageen Sariirtii uu jiifay Faarax ,kadibna waxa ay egeen Warqadahii Faarax Sariirta u sudhnaa ,balse Faarax waxa ka dhadhacsan sida uu Cadaawe u sheegay in ay yihiin dadka cadaanka ahi Mala'igtii Ilahay ee kala qoraysay Dadka Janada galaaya iyo kuwa Cadaabka galaaya.
Faarax waxa Indha'hiisa oo shan ah uu arkay iyada oo Warqadii Sariirtiisa ka lulatay ay la baxeen, kadibna inta ay Afka isasareen ay Warqadii Faarax wax ku qoreen kana tageen ,arin taasi oo Faarax murugo aad u wayn ku beertay.
Sidii cadada ahayd Faarax ayaa waxa uu la hadlay saxiibkisii Cadaawe waxaanu waydiiyay su'aashan:
Faarax waa uu yaabay ,sababta oo ah waxa uu rumaysan yahay in uu Aakhiro joogo soona dhintay ,waxa kaloo yaab ku noqotay sababta Abihii iyo Hoyadiiba Aakhiro ugu keenay ,balse hadana waxa xaqiiqsaday in uu Abihii soo dhintay madama uu Xanuun ku ogaa ,Islaantuna ay kasoo daba dhimatay naxdintii iyo muraraa'dilaacii ay ka qaaday Geerida odayga .